Akụkọ - Olee ụdị enyo plastik nwere ike dochie anya enyo enyo na-enweghị nrụrụ na nnukwu mpaghara?
Kedu rorsdị Igwe Mbara Igwe nke Pụrụ Imechi Anya Igwe Enyo na-enweghị nrụrụ na nnukwu mpaghara?
Nke mbu anyi kwesiri ighota ihe omuma nke ihe ndia:
1. Acryli mirror (Acryli, Plexiglass, PMMA, Polymethyl Methacrylate)
Advantage: elu nghọta, mirror mkpuchi nwere ike ịbụ na-abụghị akụkụ, ezi nchedo mmetụta nke reflective mkpuchi, mmetụta na-eguzogide ọgwụ (17 x ike karịa iko enyo) na shatterproof, ìhè arọ, sturdy na mgbanwe
Ọghọm: obere ihe na-emebi emebi
2. PVC plastic enyo
Uru: ọnụ ala; akwa ike; enwere ike igbutu ya ma gbanye ya
Ọghọm: ihe eji eme ihe abụghị uzo, mkpuchi enyo nwere ike ịbụ naanị n'ihu, na imecha dị ala
3. Igwe polystyrene (PS mirror)
Ọ nwere ọnụahịa dị ala. Ya isi ihe onwunwe bụ dịtụ uzo, na ọ bụ dịtụ kenkuwa na obere ike
4. Polycarbonate enyo (PC mirror)
Ngosipụta ọhụụ, inwe uru nke ike (oge 250 dị ike karịa iko, oge 30 siri ike karịa acrylic), mana inwe ọnụahịa kachasị elu
5. Enyo ugegbe
Advantage: tozuru okè mkpuchi usoro, elu echiche mma, ala price, kasị ewepụghị elu, kasị ike ihe onwunwe, wear-resistin na mgbochi ọkọ
Ọghọm: ọtụtụ brittleness, nwedịrị ike ịta mgbe a gbajiri, obere mmetụta na-eguzogide ọgwụ, arọ arọ
Na nkenke, ihe ngbanwe zuru oke, nke na-adịghị mfe nkwarụ, nke dị fechaa, na-atụghị ụjọ na a ga-agbaji ya, bụ ihe acrylic. Ndị a bụ ihe ole na ole iji jiri mirror plexiglass mirror dị ka ihe dochie anya iko iko:
Resistance Mmetụta mmetụta - Acrylic nwere nguzogide mmetụta dị elu karịa iko. N'ọnọdụ mmebi ọ bụla, acrylic agaghị akụrisị n'ime obere iberibe kama, ọ ga-agbawa. Acryli Ibé akwụkwọ ike ga-eji dị ka griin haus plastic, playhouse windo, wụsịrị windo, perspex enyo
ụgbọelu windo ụgbọelu wdg. dị ka ihe ọzọ na iko.
Transmit Light transmittance - Acryli Ibé akwụkwọ ebunye ruo 92% ìhè, mgbe iko nwere ike na-ebunye 80-90% ìhè. Dika uzo dika kristal, mpempe acrylic na-ebunye ma gosiputa ìhè karie iko kacha mma.
Enyi na gburugburu ebe obibi - Acrylic bụ ihe eji arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, yana mmepe na-adigide. Mgbe emechara mpempe akwụkwọ acrylic, enwere ike weghachite ha site na usoro ịkpụchapu. N'ime usoro a, a na-akụda akwụkwọ ndị acrylic, wee kpoo ọkụ tupu agbazee ha n'ime mmiri sirop. Ozugbo usoro a gwụchara, enwere ike isi na ya pụta.
Resistance Nguzogide UV - Iji mpempe akwụkwọ acrylic n'èzí na-ekpughe ihe ahụ maka ụzarị ọkụ ultraviolet (UV). A na-enwekwa mpempe akwụkwọ acryli na nza UV.
Na-efu ego - Ọ bụrụ na ị bụ onye na-emefu ego, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na mpempe akwụkwọ acrylic bụ usoro akụ na ụba ọzọ iji iko. Acryli mpempe akwụkwọ nwere ike na-emepụta na ọkara na-eri nke iko. Mpempe akwụkwọ plastik ndị a dị mfe ma nwee ike ibufe ngwa ngwa, nke na-eme ka ọnụ ahịa mbupu belata.
● Emere ngwa ngwa ma kpụzie ya - Epeepe acrylic nwere ezigbo ihe nkedo. Mgbe ewe iwe ruo ogo 100, enwere ike ịkpụzi ya n'ọtụtụ ụdị tinyere karama, eserese eserese na tubes. Ka ọ na-ajụ oyi, acrylic na-ejide ọdịdị ahụ.
Fechaa - acryli arọ 50% erughị ka iko nke na-eme ka ọ dị mfe aka. N'iji ya tụnyere iko, mpempe akwụkwọ acrylic dị oke ọkụ iji rụọ ọrụ ma nwee ike ibuga ya site n'otu ebe gaa ebe ọzọ.
● Glass dị ka nghọta - Acrylic nwere ihe onwunwe iji nọgide na-enwe nghọta doro anya ma na-ewe oge dị oke oge. N'ihi ogologo oge ya na nghọta anya ya, ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ na-ahọrọ ịhọrọ akwa akwụkwọ acrylic iji dị ka ogwe maka windo, griin haus, ihu igwe na windo ụlọ ahịa.
Nchedo na ike - Enwere ike ịnwe ọtụtụ ihe kpatara ịchọrọ windo ike dị elu. Ma ị chọrọ ya maka nzube nchekwa ma ọ bụ maka iguzogide ihu igwe. Mpempe akwụkwọ acrylic nwere oge 17 siri ike karịa iko ahụ, nke pụtara na ọ na-ewe ọtụtụ ike karịa na acrylic. Emebela mpempe akwụkwọ a iji nye nchekwa, nchekwa na ike n'otu oge na-eme ka iko dị ka acrylic dị ukwuu dị ka onye nnọchi
Kemgbe ọtụtụ afọ, iji mpempe akwụkwọ acrylic emeela ka iko dị elu na ntụgharị na ọtụtụ ojiji, nke na-eme ka iko acrylic bụrụ nke na-eme ka akụ na ụba, nke na-adịgide adịgide na nke ọzọ bara uru.